Musharax Xassan A. Kheyre oo gaaray Turkiga & Xogta Safarkiisa oo la helay.
October 25, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 4
ISTANBUL(P-TIMES) – Ra’iisulwasaarihii hore ee Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ahna Musharax Madaxweyne doorashada 2021-ka ayaa gaaray dalka Turkiga, halkaas oo soo dhaweyn loogu sameeyey madaarka caalamiga ah ee magaalada Istanbul, waxaana soo dhaweynta u smeeyey qaar kamid ah Shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaas.
Musharax Kheyre ayaa halkaas kulamo kula yeelanaya madaxda dawladda Turkiga oo ay ka wada hadli doonan arrimaha doorashooyinka 2021-ka, xili ay Soomaaliya & Turkigu leeyihiin xariir balaaran oo dhinacyo badan leh, iyadoo mudadii uu xafiiska joogay adkeeyey xariirka labada dal, isla markaasna la dhameystiray heshiisyo muhiim ah oo dhinacyada horey ugu dhaxeeyey.
Turkiga ayaa ah dalka kaliya ee awooda buuxd leh ee sid tooska ah u caawiyey Soomaalida, waxayna Mashaariic waa weyn oo horumarineed ka fuliyeen caasumada Soomaaliya, waxayna hadda wadaan mashaariicda Jidka isku xiraya Afgooye & Muqdisho, Dibu dhiska ciidamada Xooga dalka iyo mashaariicda dibu dhiska Madaarka diyaaradaha ee Muqdisho.
Doorashada 2021-ka Turkiga ayaa lafilayaa in ay ka mid noqdaan dalalka saameynta gudaha ku yeelan doona, maadaama ay dano waqti dheer ah ka leeyihiin Soomaaliya oo ah dal muhiim ah.
Kheyre. Waatuug afrqooble ah wax uu soomaliya ku soo kordhinayo majirto
Yaa noo keenay oo Raysul Wasaare u magacaabay?
Waa nin aad uliito khayre waa ni ka kenya
Usaxiixay dhulka somalia
Aamin mahan ninkaas ee kacarara
Nacaskaas khayr laawe
Waxaa ka darran midka noo keenay oo seddex sano iyo bar waddanka farah u geliyay haddana intaas ammaan iyo garab istaag la dhinac joogay.
Waa Raysul Wasaarihii ugu waqti dheeraa waa waddani waa dowlad madaxweyne iyo rasysul wasaare is jecel iyo bakh bakh badan
Bakh Bakh hadda xagee ku dambeeysaa.